Deg Deg, Culumo caan ka ah Galgaduud oo xabsiga Dhuusamareeb hada lagu xirxiray – Kismaayo24 News Agency
Deg Deg, Culumo caan ka ah Galgaduud oo xabsiga Dhuusamareeb hada lagu xirxiray
by admin 12th September 2016 12th September 2016 055
Wararka hada naga soogaraya magaalada dhuusamareeb ayaa sheegaya in Ahlusnunada maamusha deeganada Guriceel iyo dhuusamareeb ay xabsiga dhuusamareeb ku xireen saakay culumaa udiin caan aka ah deegaanka.
Culimada laxiraya ayaa waxay kala ahaayeen , Shiikh siciid shiikh Muxumed Cabdiraxmaan Gudoomiyihii Garsoorka Ahlusna ,Shiikh Cismaan xalaf , Macalin Cumar Macalin Xasan oo ahaa Khaadumkii Shiikh Maxamed Jamac yare iyo wiilal dhalinyaro ah .
Xariga culumadaan ayaa imanaya xili ay kuwajhanayeen dhuusmareeb si ay uga qeybgalaan munaasabada ciidul culimadaan ayaa saakay subaxdii hore ka soobaxay magalada Guriceel Gobolka Galgaduud .
Dadka qaar ayaa sheegaya in ay ku soo eedeeyeen falal amnidaro iyo waxyaabo kale aan si waxbadan uga ogaano ayaan laxariirnay dadka deegaan waxa ay na sheegeen in ay layabanyihiin dhibaatada saakay loo geystay culimadaas aynatahay wax laga xumaado in sharafka culimada wax loo dhibo.
waxaan xariir lasameynay qaar ka mid ah maamulka deegaanka ka arimiya wayna ka gaabsadeen in ay kawaramaan arimahan laxariira culimada kuxiran dhusamareeb iyo sababta loo xiray.
balse bulshada ayaa walaac xoogan ka muujiyay arinta ku soo korortay deegaanka waxaana la ogeeyn halka ay ku danbeyn doonto xariga culimadaan , wixii ka soo kordha waxaad ka socon kartaan kismaayo24 .
Madaxda Qaranka oo manta isku meeel
Magaalada Kismaayo oo manta si weyn loga ciiday Warbixin
TOP NEWS: Maxaad ka Ogtahay Balan qaadka uu Madaxweyne ku Xigeenka Galmudug u Balan qaaday Ahlu-suna hadii ay….
(AQRI XOG RASMI AH ) Maleyshiyo-beeleedka Raaskambooni oo Tacadi hor leh kula kacaya Shacabka reer Kismaayo
Daawo: Banaanbax kale oo looga soo horjeedo dowladda farmaajo oo maanta ka dhacay dagmada…..